FETIN'AINA 2016 Fiangonana Loterana Malagasy FLM Orleans
Zava-baovao eto amin’ny Fiangonantsika ny FETIN’AINA, satria sambany no hankalaza izany isika eto amin’ny FLM Orléans amin’ity 2016 ity.
Noho ny fahatsapana fa zavatra ilaina izany no antony nandrosoan’ny Komity azy. Tsy isika rahateo moa no Fiangonana voalohany manao azy ity eto amin’ny Fiangonana Loterana Malagasy.
Ny teny Soratra Masina iorenan’ny fetin’aina dia ny nanorenan’i Solomona sy ny Jiosy rehetra ny tempoly tao Jerosalema.
I Mpan.5:15-32 – Ny namorian’i Solomona izay ho enti-manao ny tempoly
I Mpan. 6:1-38 – Ny nanaovana ny tempoly
I Mpan. 7:13-51 – Ny nanaovan’i Solomona ny fanaka momba ny tempoly
Manampy azy koa ny nataon’i Ezra tamin’ny ezaka nananganana indray ny tempoly rehefa niverina avy any am-pahababoana izy ireo
Ezra.5:1-17; Ezra 6:1-22 – Ny namporisihan’i Hagay sy Zakaria ny Jiosy handroso hanao na tempoly indray, sy ny naneken’i Dariosy, mpanjakan’i Persia, ny hanaovany azy
Ezra 7:1-28 – Ny nandehanan’ny Jiosy maro koa izay nentin’i Ezra avy tany Babylona
Ezra 8:1-36 – Ny olona niaraka tamin’i Ezra, sy ny nankanesany ho any Jerosalema
Misy endrika roa no anehoana ny FETIN’AINA:
Fety hanamarihana fa mbola manana zanaka velon’aina miparitaka eran’ny Nosy na eran-tany mihitsy aza ny Fiangonana. Ny fety dia natao hisaorana an’Andriamanitra ka iarahan’ireo taranaka ireo manao ezaka fampandrosoana ny Fiangonana.
– Fetin’ny zanaka am-pielezana.
Mitovy amin’izany voalaza teo aloha ihany fa ny anarana fotsiny no samihafa.
Miankina amin’ny Fiangonana tsirairay moa ny daty hanaovana azy: amin’ny taom-baovao, amin’ny Alahady voalohany amin’ny Advento, na koa amin’ny Alahady samihafa araka izay mety sy voadiniky ny Komity sy ny Pastora.
Ny antsika amin’ity 2016 ity dia ny alahady lohavolana 04 desambra 2016, izay Alahady faharoa amin’ny Advento. Mifampiarahaba ny kristiana fa velon’aina tsara nahatratra ny taom-baovaon’ny Fiangonana. Izany no mahatonga ity fety ity lazaina fa Fetin’ny Velon’aina, raha ny marimarina kokoa.
Ho mariky ny fisaorana an’Andriamanitra dia misy raki-pisaorana, na koa raki-bolafotsy atao amin’izany.
Koa manentana antsika Kristiana rehetra eto amin’ny Fiangonana ary mba samy ho avy miaraka amin’ny ankohonany avy hiara-hisaotra an’Andriamanitra noho ny soa rehetra narotsany tamintsika. Mirary fiomanana tsara ho antsika rehetra.
Loharano nanovozana, izay isaorana indrindra nanampy tamin’ny nanoratana ity lahatsoratra ity:
Pastora EDOANy Govin, Mpitondra Fitandremana Androhibe
Pastora RATSIMBAZAFY Solohery, Mpitondra Fileovana Ambatovinaky